«Taranja vaovao !» -
AccueilTresaka«Taranja vaovao !»
«Taranja vaovao !»
14/09/2018 admintriatra Tresaka 0
Nambaran’ny filohan’ny ASPA tamin’ny alalan’ny facebook-ny fa tsy maintsy hotanterahina ilay lanonam-panokafana nanasany an’i Andry Rajoelina, na dia nanohitra izany hatramin’ny farany aza ireo mpianatra sy avara-pianarana malagasy. Taranja maro no ianarana ao amin’ny « Sciences Po » atsy Parisy, izay rahateo no mahatonga ity oniversite ity hanana ny lazany maneran-tany.
Nahatsapa anefa ny mpitantana ity oniversite ity fa mbola misy tsy ampy ireo taranja ary tsy misy afa-tsy i Andry Rajoelina irery ihany no mahay sy tompondaka amin’izany aty Afrika, indrindra aty amin’ny faritry ny ranomasina Oseana Indiana. “Taranja vaovao” vao hampidirina anaty programam-pampianarana ao amin’ny “Sciences Po” tokoa izy ity, ka izany no nilàna ny fanasana an’i Andry Rajoelina hamelabelatra azy teo anoloan’ny mpianatra.
“Coup d’Etat”, io no anaran’ilay “taranja vaovao” hampidirina ao anaty programa manomboka amin’ity taom-pianarana 2018-2019 ity ao amin’ny “Sciences Po” atsy Parisy. Mila mianatra fanaovana fanonganam-panjakana amin’izay mantsy ny mpianatra any Frantsa, indrindra ireo avara-pianarana mivoaka avy amin’itony oniversite avo lenta itony. Izay no nahatonga ireo mpikarakara tsy afaka niala mihitsy fa tsy maintsy i Andry Rajoelina izay namorona ity taranja ity ny taona 2009 no hampita izany amin’ireo manam-pahaizana sy avara-pianarana ao Frantsa.
Mbola izay ihany koa no nahatonga ireo mpikarakara tsy nanasa afa-tsy hainoamanjery tokana, dia ny “Paris Match”, nanehoana sahady ny ampihimamba ny fombafomba tsy takiana raha te hahay tsara ilay “taranja vaovao” antsoina hoe “coup d’Etat” izay tsy afa-misaraka amin’ny jadona, izany hoe, feo tokana monja no terena henoin’ny vahoaka.
Entanina sy ampirisihana araka izany ireo ray aman-dreny manan-katao mba handefa ny zanany handranto fianarana any amin’ny “Sciences Po” atsy Parisy. Mahavelona sy maha mpanam-bola haingana tokoa mantsy ny “coup d’Etat”, izay efa tafiditra ho isan’ny “taranja vaovao” ao amin’ity oniversite ity.
Lohateny vaventy navoakan’ny Midi Madagasikara ny sabotsy lasa teo, andro nandevenana ny filoha teo aloha Zafy Albert ny hoe: “funérailles nationales de Zafy ce jour: Rajoelina et Ravalo évitent Hery Rajaonarimampianina”. Izany hoe, noho ny ...Tohiny